खेलकुद::News from Nepal
आठौँ राष्ट्रिय खेलकूद: तेक्वान्दो र कराँतेमा विभागीय टोलीकै दबदबा
काठमाडौँ । प्रदेश नंं ५ मा जारी आठौँ राष्ट्रिय खेलकूदअन्तर्गत तेक्वान्दो र कराँतेमा विभागीय टोलीले जीत निकालेका छन् । आइतबार साँझसम्म सम्पन्न १२ खेलमध्ये तेक्वान्दो र कराँतेमा विभागीय टोलीकै दबदबा कायम रहेको छ । राष्ट्रिय...
सन्दीप चम्किए पछि दिल्लीको सानदार जित
जारी इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा नेपाली खेलाडी सन्दीप लामिछाने आवद्ध दिल्ली क्यापिटल्सले किङ्स इलाभेन पन्जाबलाई पराजित गरेको छ । शनिबार राति भएको खेलमा दिल्लीले पन्जाबलाई ५ विकेटले हराएको हो । पन्जाबले दिएको १६४ रनको...
विश्वकप खेल्ने नेपालको सपनामा लाग्यो पूर्णविराम, १ रनले भयो सपना चकनाचुर !
काठमाडौं । नेपालले २०२० को यू–१९ विश्वकप क्रिकेट खेल्ने सपना चकनाचुर भएको छ । मलेसियामा बिहीबार सम्पन्न छनोट प्रतियोगितामा वर्षाले प्रभावित खेलमा यूएईसँग व्यहोरेको एक रनको हार नेपाललाई घातक बनेको हो । प्रतियोगिताको अफ्नो अन्तिम...
दिल्लीको टिममा आज किन अटाएनन् सन्दिप ?
इन्डियन प्रिमियर लिग सिजन १२ को २६औँ खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्स र दिल्ली क्यापिटल्स खेल्दैछन। इडेन गार्डेन कोलकातामा भइरहेको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्समा रहेका नेपाली खेलाडी सन्दीप लामिछाने भने मैदानमा देखिने छैनन। दिल्लीले सन्दीपलाई प्लेइङ...
पहिलो खेलमै नेपालले गर्यो कमाल, सिंगापुर २१७ रनले हार्यो
काठमाडौं । आईसीसी यू–१९ विश्वकप क्रिकेटअन्तर्गत एसिया क्षेत्र छनोट प्रतियोगितामा नेपालले सिंगापुरलाई ३१ ओभरमा ६५ रनमै अलआउट गर्दै शानदार जित हात पारेको छ । रोहित पौडेलको महत्वपूर्ण प्रदर्शनसँगै नेपालले सिंगापुरसामु उक्त लक्ष्य दिएको थियो...
आठौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता आजदेखि शुरु, यि खेलहरु खेल खेलाईदैँछन् !
काठमाडौँ । प्रदेश नं. ५ मा आगामी वैशाख ५ देखि औपचारिकरूपमा उद्घाटन हुने आठौँ राष्ट्रिय खेलकूदअन्तर्गतका पाँच खेलहरू आजदेखि शुरु हुने भएका छन् । औपचारिक उद्घाटन वैशाख ५ मा हुने भए पनि लामो समयसम्म...
प्याराग्लाइडिङमा ५५ खेलाडीबीच हुनेछ भिडन्त !
काठमाडौँ । प्रदेश नंं ५ का विभिन्न जिल्लामा आगामी वैशाख ५ देखि ११ गतेसम्म हुने आठौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा प्याराग्लाइडिङतर्फ ५५ खेलाडीको सहभागिता रहने भएको छ । आठौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रदेश नं. ५ मा हुने...
आईपीएलमा सन्दीपको एक पछि अर्को धमाका
नेपाली क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटअन्तर्गत रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोरविरुद्धको खेलमा भने महंगो सावित भएको छ । दिल्ली क्यापिटल्सका लागि एक विकेट दिलाए पनि सन्दीप महंगो सावित भए । सन्दीपले ४ ओभर...
आईपिएलमा आज सन्दीपको दिल्ली र हैदरावाद भिड्दैँ, प्लेइङ इलाभेनमा सन्दीप पक्का
काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटको १३ औँ संस्करणमा सन्दीप लामिछानेको दिल्ली क्यापिटल्स र सनराइजर्स हैदरावाद बिहिबार राती आमनेसामने हुने भएका छन् । दिल्लीको फिरोज शाह कोट्ला रंगशालामा नेपाली समयअनुसार सवा ८ बजे...
ओलम्पिक छनोटको दोस्रो चरणः नेपाल र म्यानमार आज आमनेसामने
काठमाडौँ । ओलम्पिक छनोटको दोस्रो चरणको खेलमा नेपालले आज म्यानमारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । म्यानमारको घरेलु मैदानमा हुने खेल नेपाली समयानुसार साँझ ५ बजे शुरु हुनेछ । खेलअघि आज बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षक हरि...